Isaga seviki -
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 9, 2020 00: 50 Awekho amazwana
Ngamanye amazwi, uma umama ebengumthakathi, nendodakazi nayo izoba isangoma; futhi uma umama ebukeka emuhle, nayo le ndodakazi izoba muhle ?? Futhi-ke uma umama engalungile ... Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 2, 2020 00: 40 Awekho amazwana
Imvamisa umehluko phakathi komshado omuhle nomshado ohlulekile yizinto ezimbalwa, noma ngabe ukusho nsuku zonke noma cha. Isaga: nguHarlon Mil ... Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Ephreli 25, 2020 00: 45 Awekho amazwana
Kungani i-Afrika ilele ngemuva kwamanye amazwekazi? Akungatshazwa ukuthi izwekazi lase-Afrika lisala ngemuva kwamanye amazwekazi, phakathi kwezimbangela eziqondile ... Funda kabanzi